Ukuthengiswa Kwezifuyo Kwezingulube
©Dr Jim Robinson
Uma isikhathi eside ugcina izingulube epulazini, kuyabiza kakhulu ukuzondla futhi kube nzima ukuthi bangagula noma balimale. Ngakho-ke abalimi kudingeka badalule isikhathi esihle sokuthengisa izingulube zabo, ngokusekelwe ohlelweni lwabo lokukhiqiza kanye nemibandela, ukukhiqizwa kwezingulube abakhiqizayo kanye nokukhula kwezingulube zabo.
Izilwane zingathengiswa nganoma isiphi isikhathi, kepha izimboni zithengiswa ngezikhathi ezithile emasontweni ayisithupha uma zilinganisa u-9 kuya ku-10 kg ukukhulisa ukuhamba kwemali, noma amasonto ayishumi kuya kwangu-12 uma zilinganiselwa ku-25 kg. Ama-porcers nama-baconers athengiswa uma esekhulile, abanamahloni ngokuvamile aba nesisindo esibukhoma esingu-70 kg nama-bacon aphethe isisindo esibukhoma esingu-75 kg kuya ku-95 kg.
Ukunquma intengo ehlelekile, iNhlangano yaseNingizimu Afrika Yabavukuzi Bezinkukhu (SAPPO) kuma-Pigs for Incit Manufacturing manual iyala abalimi ukuba basebenzise intengo yamanje yamakhilogremu njengento yokuhamba kuyo izingxoxo. Intengo yabancanyana abancanyana abayisisindo esingama-9 kuya kwezingu-10, ngokuvamile bavame ukukhokhwa ngamanani angu-24 ngekhilogramu yezinambuzane kanye nezikhathi ezingaba ngu-30 ezitholakalayo kuma-weaners anesisindo esingama-25 kg. Inani lentengo yengulube ngokuvamile liphakeme kunabakoni. Khuluma nabanye abalimi ukuzwa lokho abakutholayo nokufunda omagazini bezolimo ukuze bazi ukuthi kwenzekani emakethe.
Kungaba iphutha elikhulu ukuqala nje u-piggery bese usethemba okuhle kakhulu ngesikhathi ozodinga ukuthengisa izilwane zakho. Ukuze uthole imiphumela emihle, udinga ukubona futhi uvikeleke emakethe ngaphambi kokutshala imali enkulu ebhizinisini lokulima, okukhulunywa kalula kunokuthi kwenziwe ngoba abathengi abaningi bafuna ukubona umkhiqizo wakho ngaphambi kokuwuthenga.
Ungasebenza ngokusebenzisa i-agent. Lawa ma-agent ngokuvamile asebenzela imali ngenxa yabakhiqizi ezindaweni eziningi zokulahla. Bayazinakekela zonke izilungiselelo ezisehlathini, njengokukhokhwa kwe-slaughter, ukuhlolwa kanye nokukhokhwa kwemali bese uxoxisana ngentengo yengulube yakho ngosuku lokubeletha.
Enye indlela iyinkontileka yangasese nomthengisi, ummemezeli noma umthengisi, okulungile ngoba amanani ngokuvamile ahlelwe isikhathi esithile esiza ukuvikela abakhiqizi ukulwa nokushintsha kwamanani nsuku zonke. Inselelo lapha ukuthi kube nevolumu eyanele nokunikezwa okuqhubekayo kwezingulube ezinhle. Abakhiqizi bangakwazi ukunqoba le nselele ngokudonsa izinsiza kanye nokuthengisa umkhiqizo wabo ndawonye.
Izingulube nazo zingathengiswa ezithengweni, ngokuqondile ezihlahleni ezincane njengoba zitholakalayo noma zokuhlaselwa ekhaya.
Lapho behambisa izilwane eziphilayo, abalimi kufanele baqinisekise ukuthi banezimvume zokunyakaza ezidingekayo, ngaphandle kwalokho izingulube zingase zithathwe. I-Pigs for Profit ixwayisa ngokuthengisa kubalingisi abahambahambayo, abaphuma epulazini baya epulazini ukuthenga izingulube, ngoba kunengozi enkulu yokuthi bangaletha isifo epulazini lakho.